Fepetran'ny pasipaoro e-Visa Indiana
E-Visa Indiana mitaky pasipaoro mahazatra. Mianara momba ny antsipiriany rehetra hidiran'ny pasipaoronao any India Mpizahatany e-Visa India, Medical e-Visa India or Business e-Visa India. Ny antsipiriany rehetra dia rakotra eto amin'ny ankapobeny.
Raha toa ianao ka mangataka ny Visa Indiana Online (e-Visa India) amin'ny dianao mankany India dia azonao atao izany amin'ny Internet izao satria ny Governemanta India dia nanolotra elektronika na e-Visa ho an'i India. Fa raha te hampihatra an'io dia mila mihaona amin'ny antoka ianao Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana ary manome koa kopia malefaka misy antontan-taratasy sasany alohan'ny hanekena ny fangatahanao. Ny sasany amin'ireto antontan-taratasy ilaina ireto dia miavaka amin'ny tanjon'ny fitsidihanao an'i India ary vokatr'izany ny karazana Visa tadiavinao, izany hoe, Tourista e-Visa ho an'ny tanjon'ny fizahantany, fialam-boly, na fitsangatsanganana, Business e-Visa ho an'ny tanjon'ny asa aman-draharaha ara-barotra, e-Visa medikaly ary mpitsabo e-Visa ho an'ny fikarakarana ara-pahasalamana ary miaraka amin'ny marary mahazo ny fitsaboana. Fa misy ihany koa antontan-taratasy sasany takiana amin'ireo Visa rehetra ireo. Ny iray amin'ireto antontan-taratasy ireto, ary ny zava-dehibe indrindra amin'izy rehetra, dia ny dika mitovy amin'ny Passport anao. Ity manaraka eto ambany ity dia torolàlana feno hanampy anao amin'ny fitakiana pasipaoro visa any India. Raha manaraka ireo torolàlana ireo ianao ary mahafeno ireo fepetra takiana rehetra azonao atao mangataka amin'ny Internet e-Visa Indiana fa tsy mila mitsidika ny masoivohon'i India eo an-toerana akory.
Ny governemanta India dia nahavita ny zava-drehetra Fampiharana e-Visa Indiana dingana avy amin'ny fikarohana, fangatahana fangatahana, fandoavam-bola, antontan-taratasy fampakaram-pahefana scan pasipaoro sy sary tarehy, fandoavam-bola amin'ny carte de crédit / debit ary ny fahazoana ny fandefasana e-Visa indiana amin'ny mailaka.
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny pasipaoro any India?
Mba hahafahanao mahazo ny e-Visa indiana, na inona na inona karazana e-Visa angatahinao dia mila mampakatra dika mitovy amin'ny elektronika na scann'ny pasipaoronao ianao. Araka ny Requirements Passport Visa any India dia tokony ho olon-tsotra na pasipaoro mahazatra, tsy pasipaoro ofisialy na pasipaoro diplomatika na pasipaoro mpitsoa-ponenana na antontan-taratasy fitsangatsanganana amin'ny karazany hafa. Alohan'ny hampakaranao kopia iray aminy dia tsy maintsy miantoka ny fijanonan'ny pasipaoronao ianao manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidiranao tao India. Ity no Validia Pasipaoro India Visa notendren'ny Governemanta India. Raha tsy mahafeno ny fepetra Validity Passport Visa any India ianao, izay farafahakeliny 6 volana hatramin'ny datin'ny nidiran'ny mpitsidika an'i India, dia mila manavao ny pasipaorinao ianao alohan'ny handefasana ny fangatahanao. Tokony ho azonao antoka ihany koa fa ny pasipaoronao dia manana pejy banga roa, izay tsy ho hita amin'ny Internet, fa ny tompon'andraikitra amin'ny sisin-tseranana amin'ny seranam-piaramanidina dia mila ireo pejy banga roa hanakanana ny fidirana / fivoahana.
Fanamarihana: Raha efa manana e-Visa karana ianao izay mbola manan-kery saingy tapitra ny pasipaoronao dia afaka mangataka pasipaoro vaovao ianao ary mivezivezy amin'ny Visa any India (e-Visa India) mitondra ny Pasipaoro taloha sy pasipaoro vaovao miaraka aminao. Raha tsy izany, azonao atao koa ny mangataka Visa Indiana (e-Visa India) vaovao amin'ny pasipaoro vaovao.
Inona no rehetra tsy maintsy hita eo amin'ny Pasipaoro hahafeno ny fepetra takiana amin'ny pasipaoro e-Visa any India?
Mba hihaonana amin'ny Requirement Passport Visa any India, ny kopian'ny pasipaorinao izay ampakarinao amin'ny fangatahanao Visa any India dia mila an'ny pejy voalohany (biografika) an'ny Passport anao. Mila mazava sy azo zahana amin'ny zorony efatra amin'ny pasipaoro hita maso ary tokony ho hita ireto andinindininy manaraka amin'ny pasipaoronao ireto:
Data momba ny fahaterahana
Lisitry ny olana momba ny pasipaoro
Datin'ny olana momba ny pasipaoro
Daty lany daty ny pasipaoro
MRZ (Andilan-kazo roa eo am-pototry ny pasipaoro fantatra amin'ny anarana hoe Magnetic Readable Zone izay ho an'ny mpamaky pasipaoro, masinina amin'ny fidirana sy fivoahan'ny seranam-piaramanidina. Izay rehetra ambonin'ireo fehin-taratasy roa ireo dia nantsoina hoe Visual Inspection Zone (VIZ) izay nojeren'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina ao amin'ny biraon'ny Governemanta India, mpiasan'ny sisintany, mpiasan'ny maso ivoho mpifindra monina.)
Ireo antsipiriany rehetra ao amin'ny pasipaoronao ireo dia tokony mifanitsy amin'ny izay fenoy ao amin'ny taratasy fangatahana. Tokony hameno ny takelaka fangatahana amin'ny fampahalalana mitovy amin'ny voalaza ao amin'ny pasipaoronao ianao satria ny antsipirihanao nofenoinao dia ampifanarahan'ny mpiasan'ny fifindra-monina amin'izay aseho amin'ny pasipaoronao.
Fanamarihana lehibe momba ny toerana nahaterahan'ny Passport Visa any India
Rehefa miditra ny Toerana nahaterahana ao amin'ny taratasy fangatahana Visa Indiana ampidiro tsara izay aseho amin'ny pasipaoronao fa tsy mila voafaritra tsara na marimarina kokoa. Raha ohatra, ny Place of Birth on your Passport, milaza an'i London, dia ampidiro ao fa tsy ny anaran'ny tanàna na ny tanàna ambanivohitra any London. Raha ny Toerana nahaterahana voalaza ao amin'ny pasipaoronao izao dia nanjary rendrika tao amin'ny tanàna hafa na fantatra amin'ny anarana hafa dia tokony hiditra amin'izay lazain'ny pasipaoronao ihany ianao.
Tsarovy ity torohevitra ity ho an'ny toeram-pivoarana Visa Visa Indiana
Matetika misy fisafotofotoana momba ny Toerana namoahana ny pasipaoro any India. Ny fanontaniana momba ny toerana famoahana pasipaoro any India dia hofenoina fahefana manome ny pasipaoronao izay holazaina ao amin'ny pasipaoronao. Raha avy any Etazonia ianao dia ny Departemantam-panjakana any Etazonia. Saingy ny takelaka fisoratana anarana dia tsy manome toerana ampy hanaovana azy feno, hahafahanao mamintina izany ho USDOS. Ho an'ny firenena hafa rehetra dia soraty ny toerana misy ny olana voalaza ao amin'ny pasipaoronao.
Ny sarinao amin'ny pasipaoronao dia mety tsy hitovy amin'ny sarin'ny pasipaoro amin'ny tarehy izay apetrakao amin'ny fangatahanao Visa any India.
Famaritana scan pasipaoro momba ny takiana pasipaoro any India
Ny governemanta India dia manana fepetra takiana, vakio tsara amin'ireto andinindininy ireto hisorohana ny fandavana ny fangatahana Visa any India (e-Visa India) anao.
Ny kopian'ny scan an'ny pasipaoronao izay apetrakao amin'ny fangatahanao ho an'ny Indian Visa Online (e-Visa India) dia mila mifanaraka amin'ny famaritana sasany izay mahafeno ny Requirement Passport Visa any India. Ireo dia:
Azonao atao ny mampakatra a scan na kopia elektronika ny pasipaoronao izay azo alaina amin'ny fakan-tsary.
ny tsy ilaina ny maka Scan na Photograpo ny pasipaoronao amin'ny scanner matihanina.
Tsy maintsy misy ny sary / scan amin'ny pasipaoro mazava sy tsara kalitao ary vahaolana avo lenta.
Azonao atao ny mampakatra ny scan Passport-nao amin'ireto endrika fisie manaraka ireto: PDF, PNG, ary JPG.
Ny scan dia tokony ho ampy lehibe ka mazava ary ny antsipiriany rehetra momba azy vakiana. Tsy fehezin'ny Governemantan'i India fa tokony ho azonao antoka fa farafaharatsiny 600 teboka amin'ny 800 teboka amin'ny haavony sy ny sakany mba sary kalitao tsara izay mazava sy azo vakina.
Ny haben'ny default amin'ny scan an'ny Passport-nao izay takian'ny fangatahana Visa any India dia 1 Mb na 1 Megabyte. Tsy tokony ho lehibe noho io. Azonao atao ny manamarina ny haben'ny scan amin'ny fipihana ankavanana amin'ny rakitra eo amin'ny PC-nao sy amin'ny fipihana ny Properties ary ho hitanao ny habeny ao amin'ny kiheba General ao amin'ny varavarankely misokatra.
Raha tsy azonao atao ny mampakatra ny lampiran'ny Passport Photo anao amin'ny alàlan'ny mailaka omena anay ao amin'ny pejy fandraisana Tranonkala Indian Visa Online
Ny pasipaoro scan tsy tokony ho manjavozavo.
Fizahana pasipaoro tokony miloko, tsy mainty sy fotsy na Mono.
Ny tsy fitovizan'ny sary tokony ho mitovy ary tsy tokony ho maizina be loatra na maivana loatra.
Ny sary tsy tokony ho maloto na potipotika. Tsy tokony ho tabataba na ambany kalitao na kely loatra. Tokony hatao amin'ny fomba Landscape fa tsy Portrait. Ny sary dia tokony ho mahitsy fa tsy mitongilana. Hamarino tsara fa tsy misy flash amin'ny sary.
The MRZ (ireo kofehy roa eo amin'ny faran'ny Passport) dia tokony ho hita miharihary.
Raha manaraka ireo torolàlana momba ny Requirement Passport Visa any India ireo ianao, dia asio ny antontan-taratasy hafa takiana amin'ny Indian Visa Online (e-Visa India), mahafeno ny fepetra rehetra ilaina amin'ny Visa Indiana, ary mangataka farafahakeliny 4-7 andro mialoha ny anao sidina na daty nidirana ao amin'ny firenena, dia tokony ho afaka mangataka mora foana ianao amin'ny Taratasy fangatahana e-Visa Indiana dia tsotra sy mahitsy. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony hifandray Birao fanampiana fanampiana e-visa karana ho fanohanana sy fitarihana.